Fanalam-baraka nataon’ny depiote Popil : Nametraka fitoriana ny Fiadidiana ny Repoblika -
AccueilRaharaham-pirenenaFanalam-baraka nataon’ny depiote Popil : Nametraka fitoriana ny Fiadidiana ny Repoblika
Tsy henatra tsy tahotra fa dia sahy mandemy ny saim-bahoaka amina fanalam-baraka sy fanivahivana mpitondra Fanjakana ireo milaza azy ho depiote ho an’ny fanovana.
Anisan’izany ny depiote voafidy tao Ifanadiana, Faritra Matsiatra Ambony, Lova Narivelo Razafindrafito, fantatra amin’ny solon’anarana Popil, izay nanala baraka sy nilaza zavatra tsy misy ataon’ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina nanoloana ny olona namaly ny antson’izy ireo tany Fianarantsoa, roa herinandro lasa izay.
Raha tsiahivina mantsy tamin’ny lahateny nataon’ity depioten’Ifanadiana ity tamin’izany, nilaza ny tenany fa “nandresy lahatra azy tamin’ny alalan’ny antso an-tariby hampandany ilay Lalàm-pifidianana ny Filohan’ny Repoblika, ary milaza ny hanome azy vola mitentina 200 tapitrisa Ar na 1 miliara Fmg”. Nambarany fa “tsy nanaiky velively izany fanomezam-bola izany izy satria izany no tena mamotika ny firenena”…
Noho izany fanalam-baraka sy fanivahivana ary fanosoram-potaka ny Filoham-pirenena nataon’i Popil izany indrindra, dia nametraka fitoriana teny anivon’ny Fitsarana ny Fiadidiana ny Repoblika tamin’ny alalan’ny mpisolovava azy, ny Me Tantely Rakotonirina.
Araka izany, ny fanalam-baraka sy fanosoram-potaka, sns, no vesatry ny fitorian’ny Fiadidiana ny Repoblika an’i Popil. Andrasana, noho izany hoy ny mpisolovava, ny vokatry ny fitoriana napetraka teo anivon’ny Fitsarana.
Nitory ny Antenimieran-doholona
Manao tohivakana ny fitoriana ireo milaza ho depiote ho an’ny fanovana na ireo depiote 73. Rehefa nitory ireo solombavambahoaka mivondrona amin’ny depiote ho an’ny fanovana ny loholona Olivier Rakotovazaha, nitory ny teo anivon’ny Fiadidiana ny Repoblika, manampy izany koa ny teo anivon’ny Antenimieran-doholona.
Nametraka fitoriana ireo depiote 73 ihany koa ny teo anivon’ny Antenimieran-doholona, ka ny mpisolovavan’ity andrim-panjakana ity, ny Me Tantely Ramaroson, no nametraka izany teny anivon’ny Fitsarana.
Raha ny fanazavana, noho ny barofo nataon’ireto solombavambahoaka mpanakorontana ireto tamin’ny mpiasa teo anivon’ny Antenimieran-doholona no vesatry ny fitoriana. Teo ihany koa ny fanaovana ramathora ireo mpiasa, eny hatramin’ireo loholona sasantsasany.
Andrasana, araka izany koa, ny vokatry ny fitoriana ireo depiote ho an’ny fanovana nataon’ny Antenimieran-doholona.
Ankoatra izay, hita ary tsapa ankehitriny fa tsy misy mpanaraka ireto mpanakorontana ireto, ka manao barofo mitety ireo andrim-panjakana mamoaka sy manery ireo mpiasa eo anivon’izany hanara-dia azy ireo.